Shiya amazwana / Izisekelo Zokuzala, Umlando / By Umhleli wewebhu we-KBTF / January 4, 2016 July 30, 2019 / famous, abantu, Ezombusazwe / Umzuzu wokufunda we-1
UFrances McGovern, osesithombeni sefayela le-1964, uthole amahlaya kumikhankaso yakhe yezepolitiki. "Kungani intombazanyana encane egqamile yasekhaya eyi-Frances McGovern yaba yindodakazi ethandekayo yamaDemocrat ama-1950s nama-1960s?" "Ngoba lo onenhliziyo enhle, emomotheka, oneminyaka engu-22 wayenokukhulu…
I-Kerry Kwezepolitiki Funda kabanzi "
Izinkumbulo ze "Fancy"
Shiya amazwana / Izisekelo Zokuzala, Umlando / By Umhleli wewebhu we-KBTF / January 4, 2016 July 30, 2019 / famous, abantu / Amaminithi we-3 wokufunda
Ngaphezu kweminyaka engamashumi amathathu inja ekhombisa inikeza izinkumbulo eziningi zabantu izinja nemicimbi. Ezinye izinkumbulo ezijabulisayo, ezinye zinomusa, kanti ezinye, zimbalwa kakhulu, ziyadabukisa. Eminyakeni edlule, abantu bakhulisa futhi bakhombisa izinja ngezizathu ezihluke kakhulu kunamanje. Kwakungaphezu kokuzilibazisa futhi…
Izinkumbulo ze "Fancy" Funda kabanzi "